ဧပြီလ လယ်လောက်မှာထွက်ရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Gaming Smartphone! – AsiaApps
ဧပြီလ လယ်လောက်မှာထွက်ရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Gaming Smartphone!
April 4, 2018 April 4, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ဧပြီလ လယ်လောက်မှာထွက်ရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Gaming Smartphone!
Black Shark Games Mobile Phone ကုမ္ပဏီရဲ့ “Black Shark” အမည်ရှိ Gaming စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဟာတော့ လာမယ့် ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်က ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ သတင်းထွက်ရှိနေပါပြီ။ မိတ်ဆက်မယ့်နေရာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Black Shark Games Mobile Phone ကုမ္ပဏီ က Xiaomi ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကို ရရှိထားတာကြောင့် Xiaomi’s gaming smartphone လို့ အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ။
Black Shark မှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 chipset ပါဝင်မှာပါ။ (ပုံအရ ?) RAM 6GB, 64GB storage/ RAM 6GB, 128GB storage နဲ့ RAM 8GB, 256GB storage အစရှိတဲ့ option ၃ မျိုးနဲ့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ GPU အပိုင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ် Andreo 630 အသုံးပြုထားပြီး OS ပိုင်းကတော့ Android 8.0 Oreo နဲ့ရောက်ရှိလာမှာပါ။ Gaming smartphone ဖြစ်နေတာကြောင့် Screen Display ကို 120Hz နဲ့ရောက်ရှိလာဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ (Razer gaming smartphone လိုပေါ့) ဖုန်းရဲ့ ရုပ်လုံးကို သေချာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် လက်ရှိမှာ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ကို သိရှိရဉီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Black Shark အတွက်စျေးနှုန်းမထွက်ရှိသေးပေမယ့် Razer gaming စမတ်ဖုန်းထက်တော့ သက်သာမယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ နောက်ပေါက် Black Shark gaming စမတ်ဖုန်းဟာ စွမ်းဆောင်ရည်အားကောင်းပြီး Mobile gamer တွေတော်တော်များများရဲ့ ထောက်ခံချက်ကိုရရှိထားတဲ့ Razer gaming စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်သွားမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Android, Rumors, Xiaomi
သုံးစွဲသူများ၏ Data များကို Facebook မှနောက်ယောင်ခံမလိုက်နိုင်ရန်ကာကွယ်ပေးမည့် Firefox Facebook Container Extension
Facebook Messenger မှာ HD videos တွေနဲ့ 360-degree ဓာတ်ပုံတွေပို့လို့ရနေပြီနော်